“Reece James ayaa ka wanaagsan Trent Alexander-Arnold” – Ciyaaryahan Chelsea u soo ciyaaray – Gool FM
(London) 03 Abril 2019. Waxaa dhowaanahan soo if-baxay isbar-bardhig lagu sameynayo difaacyada Ingiriiska ah ee Reece James iyo Trent Alexander-Arnold xilli labadooda ay booska difaaca midig ee qaranka England kula dagaallami doonaan Kieran Trippier iyo Aaron Wan-Bissaka.
Frank Sinclair oo difaaca uga soo ciyaari jiray kooxda Chelsea ayaa aaminsan in James uu ka wanaagsan yahay xiddiga naadiga Liverpool, isagoo dooddiisa saldhig uga dhigaya in da’yarka Chelsea uu ka difaacasho fiican yahay Alexander-Arnold
James ayaa kooxda koowaad ee Chelsea ka mid noqday xilli ciyaareedkan, kaddib markii Frank Lampard uu ka soo dallacsiiyay kooxda dhallinyarada waxaana tartamada gudaha uu ciyaaray 21 kulan, halka Champions League uu ka ciyaaray shan kulan.
Taas beddelkeeda, Alexander-Arnold ayaa sagaal jeer u saftay xulka qaranka Saddexda Libaax, halka James uu weli sugayo inuu safto heerka sare ee dalkiisa.
Sinclair oo 169 kulan u saftay Chelsea intii u dhexeysay 1990 illaa 1998 ayaa qiray inay adag tahay in James laga hormarsiiyo difaaca Reds, balse uu aaminsan yahay in difaac ahaan uu sarreeyo laacibka Blues.
48-sano jirkaan ayaa sidoo kale daaha ka rogay in 20-sano jirkan xilli ciyaareedkan Stamford Bridge ka soo iftiimay uu la socday horumarkiisa laga soo billaabo caruurnimadiisa, waxaana uu farta ku fiiqay in doorarka kala duwan ee uu ka ciyaari karo darteed uu James kaga door-bidayo Alexander-Arnold.
“Halka arrin ee aan ku doorranayo James waa inuu ka ciyaari karo afarta boos ee difaaca, si la mid ah khadka dhexe” ayuu yiri Sinclair isagoo la hadlayay GentingBet.
Reece James ayaa caawiyay kaliya labo gool oo horyaalka Ingiriiska ah, halka Alexander-Arnold uu caawiyay 12 gool, waana arrin caqabad ku ah Sinclair.
“Waxaa ka imaaneysa su’aal weyn marka aan James la tartansiiyo Trent Alexander-Arnold kaddib qaab ciyaareedkiisa Liverpool, balse waxaan arkaa qaladaadka uu sameynayo Trent marka uu ciyaarayo.” ayuu Sinclair ku difaacay dooddiisa.
Waxaa uu sidoo kale hoosta ka xarriiqay in James difaac ahaan ka wanaagsan yahay Alexander-Arnold xilligan sida uu qabo difaacii hore ee Chelsea, kaasoo sidoo kale qiray inay adag tahay shaqada gool caawinta ee difaaca Liverpool sameynayo in difaac kale oo qaaradda Yurub ka ciyaara uu sameeyo.